Double Row Ball Slewing Bearing Factory - China Double Row Ball Slewing Bearing ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ရေကြောင်းကရိန်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့် XZWD Slewing bearing
ရေကြောင်းကရိန်းအတွက် Slewing bearing သည် ဖောက်သည်အတွက် နှစ်တန်း လေးမှတ် အဆက်အသွယ်ဘောလုံးကို အသုံးပြုသည်။
အကြီးစားစက်ယန္တရားများသည် double row ball slewing ring bearing ကိုအသုံးပြုသည်။
အကယ်၍ သင်သည် လေးလံသော တာဝန် slewing bearing ကို လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်ထပ်ဘောလုံး slewing bearing ကို သင့်အား အကြံပြုလိုပါသည်။
၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော axial loading နှင့် radial loading ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အချင်းပိုကြီးသော စက်ယန္တရားများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ပုံးဘီးတူးစက်များနှင့် ဘီးအမျိုးအစား ကရိန်းများ၊ သင်္ဘောကရိန်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းကရိန်းများ၊ သွန်းသောသံမဏိအပြေးပလပ်ဖောင်းများနှင့် တန်ချိန်ကုန်တင်ကားကရိန်းများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော ပုံးဘီးများ
XZWD ပြင်ပဂီယာသည် လေအားအတွက် Slewing bearing
XZWD ပြင်ပဂီယာသည် သွပ်ပြားနှင့် သွားများကို ငြှိမ်းသတ်နိုင်သော လေအားအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ဝက်ဝံ
အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန် XZWD 077 စီးရီး ကြိုးဝိုင်း ဂီယာ ပါရှိသည်။
Xuzhou Wanda(XZWD) လျှောလက်စွပ် ဝက်ဝံ 077 စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။slewing လက်စွပ် sprocket နဲ့ ကွက်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လေအားအတွက် XZWD Slewing ring bearings
ဟိSlewing bearingလေတာဘိုင်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ လေအားလျှပ်စစ် တာဘိုင်များကို အများအားဖြင့် လက်ခံသည်။double-row ball လေး-ပွိုင့် contact ball bearing
ဂီယာ 020.25.500 မပါဘဲ ကွဲပြားသော ဘောလုံးအရွယ်အစား slewing bearing နှစ်တန်း
Turntable bearing သည် ကြီးမားသော axial load ၊ radial load နှင့် overturning moment ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ထမ်းနိုင်သော ကြီးမားသော bearing အမျိုးအစားဖြစ်သည်။Turntable bearings များကို အများအားဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော အပေါက်များ၊ အတွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပဂီယာများ၊ ချောဆီအပေါက်များနှင့် အလုံပိတ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် ပင်မအင်ဂျင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကျစ်လျစ်သော၊ လမ်းညွှန်ချက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အဆင်ပြေစေရန်။
သွားများပါသော သို့မဟုတ် မပါသော အဆက်အသွယ်ဘောလုံး လေးခု၊ ပြင်ပသွားများနှင့် အတွင်းအံသွားများ၊ နှစ်တန်း ထောင့်ချိုး အဆက်အသွယ်ဘောလုံး ဝက်ဝံများ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် cylindrical roller bearings၊ cross tapered roller bearings နှင့် cylindrical roller ပေါင်းစပ်ထားသော rotary bearings သုံးခုရှိသည်။၎င်းတို့တွင် အချက်လေးချက် ထိတွေ့မှုဘောလုံးသည် တည်ငြိမ်သော ဝန်ပမာဏ ပိုမိုမြင့်မားသည်။လက်ဝါးကပ်တိုင် cylindrical roller bearing သည်ပိုမိုမြင့်မားသော dynamic load စွမ်းရည်ရှိသည်။cross tapered roller bearing သည် ကြိုတင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှတဆင့် bearing ကိုပိုမိုခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှုနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောလည်ပတ်တိကျမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Rotary Bearing ကို လွှင့်တင်သည့် စက်များ၊ သတ္တုတွင်း စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆိပ်ကမ်း စက်များ၊ သင်္ဘော စက်များ၊ တိကျမှု မြင့်မားသော ရေဒါ စက်များနှင့် ဒုံးပစ်လောင်ချာ နှင့် အခြား rotary စက်ကြီးများ တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
အတွင်းပိုင်းဂီယာနှစ်ထပ်အတန်း မတူညီသောဘောလုံးအချင်း slewing bearing 023.40.1250
turntable bearing များ မြင့်တက်လာခြင်းသည် အမြန်နှုန်းနိမ့်ခြင်းနှင့် လေးလံသောဝန်လိုအပ်ခြင်းနှင့် ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့် လှည့်ခြင်းထောင့်ကျယ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။slewing bearing သည် ကြီးမားသော axial load၊ radial load နှင့် overturning moment ကို တချိန်တည်း ထမ်းနိုင်ပြီး ပံ့ပိုးမှု၊ လည်ပတ်မှု၊ ဂီယာနှင့် fixation ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ၀င်သည့် ကြီးမားသော အထူးဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသော ကြီးမားသော ဝက်ဝံအမျိုးအစားဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။Slewing bearing ကိရိယာသည် အလုပ်လုပ်သောဝန်၊ dead weight load၊ slope load၊ collision load၊ temperature load စသည်ဖြင့် ဝန်များစွာကို ထမ်းနိုင်သည်။အောက်ဖော်ပြပါသည် အမျိုးမျိုးသော slewing bearing ကိရိယာများ၏ ဝန်ကို ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါသည်။
မတူညီသောဘောလုံးအချင်း 021.40.1400 ဖြင့် slewing ball နှစ်တန်း
နှစ်ထပ်ဘောလုံးအမျိုးအစား slewing bearing တွင်ထိုင်ခုံကွင်းသုံးခုရှိသည်။သံမဏိဘောလုံးနှင့် သီးခြားပိတ်ဆို့ခြင်းအား ပြိုင်ကားလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းသို့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။အင်အားအခြေအနေအရ၊ အချင်းအမျိုးမျိုးရှိသော သံမဏိဘောလုံးနှစ်တန်းကို စီထားသည်။
ဒီလိုမျိုး အဖွင့်အစည်းက အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။အပေါ်နှင့်အောက်ပိုင်း ပြိုင်ကားလမ်းကြောင်းများ၏ ဘက်မလိုက်ထောင့်များသည် 90° ဖြစ်ပြီး ကြီးမားသော axial force နှင့် မှောက်သည့်အခိုက်အတန့်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။radial force သည် axial force ၏ 0.1 ဆ ထက်ပိုသောအခါ၊ raceway ကို အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။နှစ်ထပ်ဘော်လီဘောအမျိုးအစား slewing bearing သည် ကြီးမားသော axial နှင့် radial dimension ရှိပြီး ခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။တာဝါတိုင်ကရိန်းနှင့် ထရပ်ကားကရိန်းကဲ့သို့ အချင်းအလတ် သို့မဟုတ် အချင်းအထက်ရှိသော တာဝါတိုင်ကရိန်းကဲ့သို့ တင်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်ချခြင်းအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
XZWD Double row ball သည် Big capacity Slewing Ring Bearing ဖြစ်သည်။
1. နှစ်ထပ်ဘောလုံး slewing bearing တွင်ထိုင်ခုံကွင်းသုံးခုရှိသည်။
2. နှစ်ထပ်ဘောလုံး slewing bearing တွင် ပိုကြီးသော raxial နှင့် radial အရွယ်အစားရှိသည်။
3. Doule row ball slewing bearing တွင် differnet diameter ball structural နှင့် တူညီသော diameter ball structural ရှိသည်။
4. ကရိန်းနှင့် အဏ္ဏဝါစက်ပစ္စည်းများအတွက် အထူးသဖြင့် နှစ်ထပ်ကုန်ကြမ်းဘောလုံး slewing bearing
3.Strict in-process အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ 100% ကုန်ချောစစ်ဆေးခြင်း။
- ဝင်လာသောပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
- ကုန်ချောနှင့် အဝင်စစ်ဆေးခြင်း။